Aquarium DIY | Ny trondro
Tahaka ny zava-drehetra amin'ity fiainana ity, ny aquariums dia azo ovain'ny tompony ihany koa. Andao atao hoe afaka manao aquarium diy mifandraika amin'ny faniriantsika ny hanova azy io mba hahasoa azy indrindra sy amin'ny fomban'ny aquarium tsirairay avy.
Ao amin'ity habakabaka ity hahita torohevitra isan-karazany ianao, fitaovana, fitaovana ary antsipiriany mba handray an-tanana hankafy XNUMX% azo antoka Aquarium DIY, na farafaharatsiny farafaharatsiny mba ho an'ny trondro, fano, amphibiana na invertebrata ankafizo tsara ny tranonao.
Aza adino fa ny trondro tsirairay dia mila ny filany ary mila mandray an-tsipiriany maro isika mba hampifanaraka ny aquarium tsirairay amin'ny filan'ny karazany tsirairay.
Hery ny fampahalalana ary tsara foana ny mikaroka sy mifanohitra mba tsy hanao lesoka.
Raha tsy misy fisalasalana, ny silicone ho an'ny aquarium dia fototra iray tsy maintsy anananay amin'ny tranga mety hitranga, izany hoe, raha ...
Firy ny trondro azo hapetraka ao anaty aquarium?
ny Portillo Alemanina hace 2 taona .
Iray amin'ireo fanontaniana lehibe napetrak'ireo rehetra te-hanomboka amin'ny tontolon'ny ...
Jiro marina ao amin'ny aquarium
Zava-dehibe tokoa ny fijerena ny kalitaon'ny jiro ao anaty aquarium, indrindra raha manana zavamaniry isika, ka ...
Manaova aquarium anao manokana
Rehefa misafidy aquarium dia tsy fantatsika foana hoe inona no karazana mety indrindra ilaintsika. Eny…
Singa haingon-trano: Vato sy vato ao anaty aquarium
Ireo singa haingon-trano, toy ny vato sy vato, dia tsy maintsy mampifaly ny maso ary mety amin'ny ...
Fomba iray hafa hanovana ny rano aquarium
ny Ildefonso Gomez hace 7 taona .
Na dia dingana tsotra aza ny fanovana ny rano ao anaty aquarium, ny marina dia tsy izay ...
Mila ny habak'izy ireo koa ny trondro
Betsaka ny fotoana nijerentsika ireo tanky trondro na aquarium izay ...
Fananganana ny Aquarium Rano Masira anao
ny Viviana Saldarriaga hace 10 taona .
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny iray amin'ireo fanontaniana tsy maintsy ananan'ireo olona manana fanahin'ny aquarist ireo dia ny fomba ...
Manaingo ny fanambanin'ny Aquarium anay
Rehefa manana Aquarium aho dia tsy tokony hieritreritra ny haben'ny dobo fotsiny, ny trondro alehantsika ...
Manaingo ny Aquarium miaraka amin'ny vatosokay
Araka ny hitantsika teo aloha, na dia maro aza ny olona tsy mino an'io, ny haingo ao anaty aquarium dia ampahany lehibe amin'ny ...